Date My Pet » 5 Ita uye Nezvokusaita pamusoro Kunobudirira Online Dating
kubudikidza April Aragam
kufambidzana Online wava chimwe chezvinhu yakakurumbira nzira kusangana nevanhu vatsva. kufambidzana Online, kufanana chinhu chimwe, ine pfungwa zvakanaka uye kunaka. Saka ungadzora sei hubudirire pachako? Nyaya iyi inotaura 5 kuita uye Nezvokusaita kuti achakubatsira kufamba paIndaneti kufambidzana zvishoma pakunwa.
ita: Mafomu zvokufambidzana Profile
Zvakakosha kupindura mibvunzo iri kufambidzana Profile. Uyu ndiye wokutanga mukana vanhu kuwana kudzidza zvishoma pamusoro pako. Haufaniri kutaurira nyaya youpenyu hwako hwose, asi imi vanoda kupa kupfuura vakaroorana zvinokosha. Munyaya pamusoro pangu chikamu taura zvaunoda kutaura here kushanda kana kuenda kuchikoro, chii uchinakidzwa kuita kwenyu wakasununguka nguva, uye kutaura chinhu zvishoma yakasiyana kuti unokumutsa nezvimwe vanhu. Unonzwa pahofisi muto kicheni kaviri pamwedzi? Unonzwa nhengo netsvimbo bhuku chete anoverenga Classics? taura izvozvo! Zvinoita sokuti sechinhu chiduku kwamuri, asi kune munhu kuverenga kwako Profile izvozvo kuchakubatsira kumira kubva nevamwe.
regai: Taura pamusoro tariro yako uye zviroto kuti ukama
Zviri zvakakwana yakanaka kutaura kana uri kutsvaga chekanguva ukama kana chinhu kupfuura refu-refu. Unoda kusangana nemunhu anoda zvimwechete. Kana ukatanga kutaura sei uchazova upedze Krisimasi yokutanga pamwe chete, rudzii muchato wabatwa kurota, kana kuti vana vazhinji uchida kuva, uchazova unozvidzinga zvinogona mazuva kure. Siya Kukurukurirana avo gare gare apo maita vava zvakakomba.
ita: Add kuchangobva mifananidzo
Unogona vanosarudza kuti mufananidzo wenyu wakatora makore matatu apfuura mupaki kuti akaita kuti unzwe somunhu bombshell, asi zvakakosha kushandisa ichangopfuura photos. Vanhu kusanduka nenguva kunyange zvazvo ungave nharo uchiri kutarisa zvikuru saizvozvo wekare photos. Your bvudzi ruvara, urefu, uye manyorerwo zvichida achinja. Ungadaro kwakadonha kana kupfeka makirogiramu mashomanana. Kunyange kwako pachako Style angave achinja. Kana kuposita pikicha uye kusangana munhu munhu, munoziva vachazowana kuti kutarisira munhu ari mufananidzo. Funga kuti waizonzwa sei kana munhu wasangana akanga ane mbiri egore photos apo aiva zvishoma bvudzi uye zvishoma zvishoma dumbu. Hazvina vanhu asingafungi kuda kuziva zvavari kusangana.
regai: Mirira yakarebesa kusangana
Online kufambidzana nzvimbo zvinogona kuva nzvimbo huru kusangana nevanhu vatsva, asi imi zvimwe havadi ukama kuramba paIndaneti kwemwedzi kumucheto. Zvakakosha kutora ukama hwako itsva kubva paIndaneti ari munhu. Kamwe waita vakatsinhanisa na uye zvinyorwa unogona kuenda padanho rinotevera, riri kutaura pafoni. Kana uchiri kunzwa kubatana uye vanoda kusangana, kuita zuva! Kana uchigara kure kure uye haagoni chete nemotokari kusangana mumwe, Kanenge Skype kusvikira muchikwanisa.
ita: Kuvimba dumbu rako
Kana kuwana kusetsa kunzwa pamusoro munhu nokuda chinhu ari iye akati kana kuburikidza kuita vasava pakanzi wawana chinhu usingabereki kuwedzera kukwira, kuvimba kuti kunzwa. Zvechokwadi Unogona kubvunza mibvunzo nezvazvo, asi kana iwe uchiri sokuti chinhu chiri kure, inguva kutsigira kure uye kusangana nevanhu vatsva. Haudi kupedza kutanga ukama hutsva kufambira nhema uye mashoko uye kuramba vachishamisika kana chinhu chinotevera mumuromo wake zvemanyepo. Nguva dzose kuvimba kwako zvauya mupfungwa.
kufambidzana Online haazorambi nguva dzose kuva wakatsetseka tasva. Uchaita vanokanganisa uye muzive nani inotevera nguva.
5 Zvinhu Unogona Kudzidza About Dating From 50 Noruvara Grey
Zvaunofanira Zvechokwadi kuziva: Chivalry Mambo